Somali Links – HORNAFRIC MEDIA
Is this a research or an April Fools day?
Posted on October 4, 2018 October 10, 2018 by Kaafi
“Popularity of the regional presidents was generally low in the regions. Out of the 6 regions sampled only two regional federal state presidents had more than 50% confidence rating. These are Southwest State with 55% and Jubbaland with 52%. The rest had scores ranging from 43% and 31% with the lowest confidence score registered by Puntland at 31%”.3 Ironically what is written on the research and the reality are different.But pls do not laugh but…
Gurigii looga Dhawaaqay Somaliland oo isu Badalay Goob Qamri meesha 18 May na isu badashay 15 May oo ah Maalintii SYL…Daawo
Posted on May 6, 2018 May 7, 2018 by Kaafi
https://youtu.be/3lKVBf1esR8?t=13s	Read More
R/Wasaare Khayre Oo Amray In Xilka Laga Ceyriyo Gudoomiyaasha Degmooyinka maantay laga bilaabo haday.Daawo
Posted on April 15, 2018 April 15, 2018 by Queen Kiin
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa digniin Culus u jeediyay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir oo xilligan wajahaya culeysyo uga imaanaya Madaxda dowladda, kaddib markii lagu wargeliyay in wixii hada ka bilowda lagula xisaabtami doono shaqadooda. “Runtii maalin dhoweyd Madaxweynaha waad la kulanteyn, wuxuuna idiin sheegay in uusan ku qanacsaneyn shaqadiina iyo amni darada magaalada waxaa idinku soo celinayaa farriinta Madaxweynaha idin soo gaarsiiyay laga bilaabo maanta amniga magaalada waa in aad sida ugu dhaqsiyaha…
Farmaajo iyo Kheyre oo Hal Musharax Awoodooda isugu geynaya si uu u noqdo Gudoomiyaha Golaha Shacabka.
Posted on April 15, 2018 by Queen Kiin
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa awoodooda isugu geynaaya Hal Musharax si qof aan siyaasadooda la jaanqaadi Karin uusan ugu guuleysan Guddooomiyaha Golaha Shacabka. Kulamo aan kala joogsi laheyn oo ka socda Madaxtooyada Soomaaliya iyo Xafiiska Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa laga filan karaa in sida ay wax u rabaan ay u dhacaan Madaxda dalka, waxaana iyagoo ka cabsi qaba in lagala dhex baxo ay balanta kaga baxeen…
Maxaa ka jira in iscasilaadii Jawaari ay ka dambaysay Lacagtii Shalay.
Posted on April 9, 2018 by Queen Kiin
Senetor Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Golaha aqalka sare ee dalka ayaa sheegay in uusan tuhmeynin in uu guddoomiyihii hore ee bGolaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu qaatay lacag. Senetor-ka ayaa sheegay in Guddoomiye Jawaari uu qaatay go’aan odaynimo hayeeshee waxaa uu sheegay in aysan jirin tuhunka qaarkii ee magaalada ku jira. Xildhibaanka ayaa sheegay in Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu u fududeeyay dadka iyo dalka islamarkaana go’aan gaaray xilli adag,waxaana uu…
War Deg Deg ah Jawaari oo Is Casilay.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyahii golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii uu hayey. Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee golaha shacabka C/weli Muudey ayaa xildhibaanno saakay tagay golaha shacabka waxa uu ka hor akhriyey warqad uu sheegay in guddoomiye Jawaari isku casilay islamarkaana uu u qoray madaxweyne Farmaajo. Warar ay Hornafric ka heshay guddoonka golaha shacabka ayaa xaqiijiyey in Jawaari uu is casilay kadib markii uu cadaadiska ku batay iyo isaga oo…
Maxay ahayd lacagtii Imaaraadka ee lagu qabtay Garoonka Muqdisho..?
Posted on April 8, 2018 by Queen Kiin
Kadib markii la fasaxay diyaaradii siday lacagtii faraha badanayd oo galabta lagu qabtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho kuna socotay Safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho ayaa warar kala duwan kasoo baxayaan halka ay ku danbeysay lacagtaasi. Saraakiil ka tirsan NISA ayaa xaqiijiyey inay lacagtaasi ay ku wareejiyeen Bankiga Dhexe iyadoo halkaasi lagu hubin doono halka ay ku socotay cadadkeeda iyo xaqiiqada ku saabsan shixnadaasi lacageed. Safaaradda Imaaraadka ayaa la timid warqad qoraal ah oo kusaabsan keenista lacagta…
Maxaa ka Jira in Madaxweyne Farmaajo Mooshin Laga Keenay.
Xildhibaano iyo dad kale duwan oo Hornafric Xiriir la samaysay ayaa noo sheegay in aanay jirin mooshin ka duwan midka Jawaari ee weli la isku maandhaafsan yahay warar saacadihii la soo dhaafay suuqa la soo geliyay oo ahaa in Mooshin cusub uu jiro uu yahay mid waxba kama jiraan. Sidoo kale dhinacii kale ee taageerayaasha Jawaari ayaa kulamo u socdaan waxaana iyana qorsheynayaan in ajandahoodii horay u degsanaa inay berri la tagaan shirka sidaasna uu…
Waa Kuma Shaqsiga Kheyre Uu La Rabo Inuu Noqdo Guddoomiyaha Golaha Shacabka?
Ra’iisul wasaaraha dalka, Xasan Cali Kheyre ayaa diyaarsaday shaqsiga bedali lahaa guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kaasi oo dad badan ay yaqaanaan. Kheyre ayaa xilkaan la raba wasiirka difaaca Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh maadaama uu kasoo jeedo beelaha xaqqa ugu leh kursigan. Kheyre ayaa shaqsigan ku dooranaya inuu yahay qof isaga taageersan, islamarkaana aan hadalkiisa diideyn, saxiix walbana uu ka qaadan karo. Siyaasiyiin badan ayaa qaba in haddii ay dhacdo in shaqsigan xilkaan helo…
Ganacsade Caan ahaa oo la Toogtay iyo Xiisad adag oo ka Taagan Laascaanood.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay Xiisad ka dhalatay Ganacsade lagu dilay xalay Xaafad ka mid ah degmadaasi. Ninka xalay lagu dilay Laascaanood ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Timir. Maleeshiyo Hubeysan oo ka carreysan dilka Ganacsadaha ayaa Saakay lagu arkay Xaafado ka mid ah degmada. Maleeshiyadda ayaa u abaabulan qaab beeleed waxaana ay sheegeen in Ganacsadaha loo dilay Aano…
Mooshinkii Jawaari oo markale Barri Loo madlan sanahay.
Farriimo qoraalo ka yimid Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka ayaa loo kala diray xildhibaanada, kaasoo loogu sheegayo Xildhibaanada in berri uu jiro kulanka Baarlamaanka, ajandahana yahay Mooshinka Jawaaro laga keenay. Farriimahan ayaa soo dhacay xilli daqiiqado ay wada hadalo u socdeen Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye Jawaari iyadoo labada maalmood ee la soo dhaafay ay socdeen dadaalo iyo waan waan xal loogu raadinayay khilaafka. Warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro kala aragti duwanaan u dhaxeeya…
Degmo ka mida Muqdisho oo Dagaal uu ka dhacay ayaa…
Posted on April 5, 2018 by Queen Kiin
Wararka inaga soo gaaraya degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal uu ka socdo xaafada 77 ee degmadaasi. Dagaalkan oo si gaar ah uga socdo meel ku dhow Haanta-dheer ayaa waxa uu u dhaxeeyaa laba Maleeshiyo beeleed oo isku qabsaday dhul ku yaalla halkaasi. Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen in marqura ay maqleen rasaas fara badan oo la is weedaarsaday kadibna ay dareemeen inuu jiro iska hor imaad u dhaxeeya…
Qalin jabintii geerida dhashay!
Inta la xaqiijiyay in ka badan 70 caruur ah ayaa ku dhimatay, weerar lagu qaaday xaflad qalin jabin ah oo ka dhaceysay School Qur’aanka lagu barto oo ku yaala degmada Dasht-e-Archi ee gobalka Kunduz ee wadanka Afganistan, sida ay marqaatiyaal u sheegeen TV-ga Aljazeera. Diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Afganistan ayaa la sheegay iney duqeynta fuliyeen. Afhayeenka wasaarada difaaca ee Afganistan, Mohammad Radmanish, ayaa u sheegay Al Jazeera in duqeyntan loola dan lahaa madax sare oo…
Alaha U Naxariistee waxaa la Xaqiijiyay Geerida Fanaanadii Codka Shimbaraha Lahayd ee….
Posted on April 4, 2018 by Queen Kiin
Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa laga xaqiijiyay in goordhaw magaaladaasi ku geeriyootay Allaha u naxariistee fanaanada qaranka Sahra Axmed Jaamac. Fanaanada ayaa la sheegay in ay u geeriyootay xanuun hayay sida ay xaqiijiyeen eheladeeda waxaana Fanaanadan mudooyinkii dambe ay ka mid ah Fanaaniin badan oo ku noolaa magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland. Allaha u naxariistee Fanaanada Sahra Amed Jaamac ayaa kamid aheyd Hoobalada Waabari waxa ayna kamid aheyd fanaaniinta ugu caansan looguna jeclaa…
In ka badan 25 Arday oo ku Sumoowday Muqdisho ka dib Jalaato ay Cuneen iyo xaaladooda oo..
Sida ay xaqiijiyeen Maamulka Iskuulka Global oo ku yaalla degmada Kaaraan Arday ka badan 25 Arday ayaa ku sumowday Jalaato ay dhuuqaayeen. Ardaydaan ayaa la sheegay in xanuun uu kusoo booday markii ay Jalaatadda Afka Saareen waxaana loo cararay Isbitaal. Sidda ay Xaqiijiyeen Maamulka Iskuulka iyo dadka degaanka arday ayaa qaarkooda ku jira Xaalad Adag waxaana la sheegay in laga raacay Jalaato. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa u Gurmaday Durba Ardaydaas iyagoona sheegay inay Baaritaano ku…
DEG DEG: Amisom oo Ciidamadii Jawaari kala wareegtay Xaruntii Golaha Shacabka & Arin cusub oo soo..
Taliyaha ciidamada AMISOM iyo ciidamo uu wato ayaa goor dhoweyd gaaray xarunta Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo ka saaray ciidamadii taabacsanaa Guddoomiye Jawaari iyo guddoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cawad. Taliyaha AMISOM Gen. Paul Lokech oo xalay la kulmay Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa kula ballamay inaan wax ciidamo ah lala gelin gudaha xarunta Baarlamaanka waxaana dhacday xaalad ka duwan iyadoo taliyeyaasha ciidamada dalka ay shaaciyeen in ciidamo aan la aqoon ay Guddoomiye Jawaari iyo ku…
Taliyaasha Ciidanka dowlada oo Shir Jaraa’id qabtay kana hadlay Ciidankii Jawaari ee la wareegay maantay Xarunta BF.
Waxaa goordhaw magaalada Muqdisho shir jaraa’id si wadajir ah ugu qabtay Taliyaasha ciidanka Nabad Sugida, Milatariga , Booliiska iyo Asluubta waxa ayna ka hadleen ciidankii maanta la sheegay in ay la wareegeen xarunta Golaha shacabka. Taliyaasha ayaa shirkooda jaraa’id ku sheegay in Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaaliya iyo kuxigeenkiisa labaad ee xadgudub ku sameeyeen laamaha amaanka ayna ciidamo hubeesan aan la isla ogeyn la galeen xarunta golaha shacabka. Waxa ay sheegeen Taliyaasha in Gudoomiye Jawaari iyo kuxigeenkiisa…
Xildhibaano Ku Shiray Muqdisho Oo Ka Digay In Arbacada Mooshinka La Horgeeyo BF!
Posted on April 2, 2018 by Queen Kiin
Xildhibaanada la magac baxay Badbaadada baarlamaanka oo kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay Halka ay wax marayaan oo ku aadan Dadaaladii Madaxweynaha iyo Mooshinka Jawaari. Xildhibaanadan oo Boqol ku dhow ayaa Kulan qado ahaa oo ay isugu yimaadeen kadib waxey Faahfaahiyeen waxyaabaha ka soo baxay kulankii ay uga hadlayeen, qorshaha marxaladda xigta, arrimaha barlamaanka ee taagan, nabadgalyada dalka & xaaladda xuduudaha dalka ka soo korortay. Xildhibaanada ayaa ka digay, Kulanka Arbacada ee Baarlamaanka…
Jawaari oo Go’aan lama filaan ah ka qaatay Shaqo joojintii C/weli Muudey ku sameeyay Xoghayaha guud ee BF .
Posted on April 2, 2018 April 4, 2018 by Queen Kiin
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamanka Federaalka Maxamad Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxba kama jiraan iyo sharci darro ku tilmaamay go’aankii Gudoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiwali Sheekh Ibrahim Muudey uu shaqada kaga joojiyay Xogeyaha Guud ee Baarlamanka Cabdikarim Xaaji Cabdi Buux. Guddoomiye Jawari oo qoraal soo saaray goor dhoweyd ayuu sheegay in go’aankaasi aanu heysan wax sharciyad ah isla markaaana guddoomiye ku xigeenka koowaad awood u lahayn inuu shaqo ka fariisin ku sameeyo xoghayaha guud ee…